Dowladaha Ruushka Iyo Mareykanka Oo Askar Suuriya Looga Dilay. – Calamada.com
Dowladaha Ruushka Iyo Mareykanka Oo Askar Suuriya Looga Dilay.
Askari u dhashay Dalka Ruushka ayaa ku dhintay meel ku dhow magaalada Xalab ee Waqooyiga Dalka Suuriya, taasi oo 15 Askari ka dhigeysa khasaaraha dhimasho ee Â Ruushka kasoo gaartay dalkaasi tan iyo intii ayÂ billaabatay faragelinta Meliteri ee ay ku sameeyeen dalka Suuriya tobon bilood ka hor.
Wakaaladda Wararka Taas oo soo xiganeysa Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in Askariga geeriyooday uu ku sugnaa meel ku dhow magaalada Xalab markii kolonyo uu la socday lagu qarxiyay Miino Waddada dhinaceeda lagu aasay.
Kooxaha Mucaaradka Suuriya ayaa maalmo ka hor sheegay inay beegsadeen bar Melteri oo ku taalla Waqooyiga magaalada Xalab, waxaya tilmaameen in weerar halkaas ka dhacay ay ku dileen Askar iyo Saraakiil Ruush ah.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa dhankeeda waxay maalmo ka hor xaqiijisay in Askari ka tirsanaa Ciidankeeda inuu ku dhintay weerar ka dhacay Dalka Suuriya, inkastoo ay san Wasaaraddu bixin faah faahin intaas ka babadan.
Sidoo kale horraantii bishan ayaa waxaa dalka Suuriya ku dhintay laba duuliye oo ka tirsanaa Ciidamada Cirka ee Dalka Ruushka, kadib markii diyaarad Helicopter ah oo ay la socdeen lagu soo riday magaalada Tadmur ee Gobolka Ximis.
Dhinaca kalena Kooxaha Kuddiyyiinta Calmaaniyyiinta ah ee loo yaqaano YPG ee ka dagaallama Dalka Suuriya ayaa sheegay in Muwaadin Mareykan ah oo ka garab dagaallamayay Maleeshiyaadkooda in lagu dilay deegaan kuyaalla bariga magaalada Xalab ee Waqooyiga dalkaasi.
Hooyada dhashay Askarigaas ayaa sheegtay in Qunsuliyadda Mareykanka ee Dalka Turkiga ay soo gaarsiiyay geerida Wiilkeeda.
Bishii May ee aan soo dhaafayna waxaa Dalka Suuriya lagu dilay Nin u dhashay dalka Portugal oo ka bar bar dagaallamayay Kooxaha Kurdida, waxaana kasii horreeyay Muwaadiniin kale oo reer galbeed ah oo dalkaasi lagu dilay iyagoo ka dhinac ka dagaallamaya Maleeshiyaadkaas Calmaaniyyiinta ah.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 18-10-1437 Hijri.
Next: Qarax Askarta Shisheeyaha Lagula Beegsaday Shabeelada Hoose.